Posted by admin on August 11 2013 16:13:21
HS:-Magaalada B/weyne oo ay wali ku sii qulquleyso lacagtii Shilin Soomaaliga false-da aheyd ee uu magalada Cadaado ku daabacayey Maxamed Aden Tiiceey oo dhalasho Mareykan ah heysta, maxaase ka jira in Mr Tiiceey ay aqoonyahano Soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay Washington ay dacwad ku furayaan dhawaan.Wararka Caawa.
HS:- Dalka Soomaaliya waxaa Ka socda dagaalo wajiyo badan oo lagu xalaaleysanayo hantida shacabka ka soo daalay colaada iyo dagaalada sokeeye. hadaba waxaa gudaha wadanka Soomaaliya laga hirgaliyey mashiino lagu daabaco lacagaha Shilin Soomaaliga falsada ah kuwaasi oo yaala Suuqa Bakaraha Magaalada Mogdishu, wadanka Suudaan oo mudo u soo daabaci jiray madaxweyne Shariif isaga qudhiisa wali lama oga inuu sidii iskaka daabaco waxaase la qirsan yahay in ay labo warshadood oo waaweyn yaalaan magaalada Mogdishu iyo Cadaado.
Hadaba mashiinka 1aad waxuu ku dhax yaalaa suuqa Bakaaraha waana kan ugu weyn ee dalka Soomaaliya yaala ee lagac intii la doono lagu daabaco midka kalena waxuu ku yaala magaalada Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud.inta aanan faalo dheer u galin warshada taala Suuqa bakaaraha waxaanu hada si horu dhac ah uga waxbixineynaa magaalada Cadaado.
Magaalada Cadaado waa magaalo xarun u ah burcad badeeda Soomaaliya waxaana magaaladaas mudo 2 sano ku dhawaad geeyey warshad sameysa lacagta shilin Soomaaliga bugta ah nin heysta dhalashada wadanka Mareykanka oo lagu magacaabo Tiiceey oo sheegan jiray maamul hal magaalo ka dhisan oo la yiraahdo Ximin iyo Xeeb. Tiiceey oo ka faaideysanaya lacago badan oo ay burcad badeeda Soomaaliya ka heleen maraakiibta lagu aftuubto biyaha badweynta Hindiya amaba xeebaha Soomaaliyeed ayaa warshada hada lacagta sameysa sida warar horudhac ah lagu helayo kula shirkoobay mid ka mid ah hogaamiyaasha Burcad Badeeda oo lagu magacaabo Afweyne kana soo jeeda beesha Habargidir gaar ahaan Jufada Saleemaan oo uu Mr Tiiceey ka soo jeedo isaguba.
Warshada ayaa waxey maalintii soo saartaa 175 Million oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta 15 kun oo dolar maalintii lacagtaas oo %80 loo daabulo Hiiraan gaar ahaan magaalada Béweyne oo ah goobta kaliya ee ay dalka Soomaaliya ka shaqeyso,waxaana daabaca labo injineer oo u dhashay dalka Hindiya.inkasta oo ay hubin badan u baahan tahay halkii warshadaas laga keenay ayaa hada waxey dadka cadaado qaarkood sheegayaan in laga soo iibiyey dalka South Africa.
Mr Tiiceey ayaa ah nin ku noolaa mudo dalka Mareykan markii ay dhawaan shacabka Hiiraan ka dhiidhiyeen sida hantidooda loo dhacayo ayna baanaan baxyo waaweyn sameeyeen ayaa waxaa hal mar kor u kacay maciishadii sida la rumeysan yahayna iyagoo aan cidna ka baqeynin waxey rag ku sugan Cadaado idaacadaha ka sheegeen in ay si kumeel gaar ah u xireen warshadii daabaceysay lacagta false-da ah. bal ka warama magaalada lagu daabacayo lacagtaas waa magaalada ay ka soo jeedo xaaska Réwasaaraha Soomaaliya Caasho Xaaji Cilmi.
Sidoo kale bal ka warama madaxweynaha, Réysulwasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamanka wadanka ka jira maanta ee idaacadaha ka dhageysanayo in ay warshad dadka lagu dhacay ay ku taalo Cadaado ee aan ka hadli karin waliba la leeyahay waxaanu u xirnay si kumeel gaar ah masuuliyadna sheeganaya.
Sikastaba aqoonyahano Soomaaliyeed oo uu fadhigoodu yahay magaalada Washington DC ayaa hada bilaabay sidii ay Mr Tiiceey oo heysta dhalashada Mareykanka ku furaan dacwad aan la oegyn inta ay qaadan doonto laakisne u muuqata mid dhab ah.
Mr Tiiceey oo ay hada ku socoto baaritaano kala duwan ayaa hadane waxuu dalka Mareykanka ka degan yahay magaalo lagu magacaabo BurnVille oo ka mid ah gobolka Minasota waxeyna xaaskiisa oo ka soo jeeda beesha Habrgidir gaar ahaan jufada Ceyrka iyo caruurtiisuba ku nool yahiin guryaha low income-ka loo yaqaano ee ay dowlada Mareykanka dejiyaan dadka saboolka ah waxuuna kaka nool yahay coplex loogu magac daray Chancellor Manor adresska rasmiga ah waxaan soo bandhigeynaa marka ay bilaabato dacwada maadaama uu hada gacanteena ku jiro.
Mr Tiiceey waxuu dalka Mareykanka qaab qaldan ku soo galiyey wiil uu dhalay ninka ugu sareeya burcada Soomaaliya ee loo yaqaano Afweyne wiilkaasi oo hada ku nool dalka Mareykanka.
Sikastaba Mr Tiiceey ayaa masuuliyadii uu sheeganayey iskaka tagay kedib markii uu dareemay in wax yaabaha uu faraha kula jiro ay danbiyo noqon karaan mustaqbalka.
Sikastaba warshadii sidii ayey wali u daabaceysaa lacagtii magaalada Bélet-weynane sidii ayey ugu qulquleysaa sida aanu ku heleyno xogag kala duwan iyadoo qaab ka duwan qaabkii hore ee loo isticmaali jiray gawaarida loo bedelay dhinaca xoolaha in lagu soo galiyo.
Isku soo duuboo dalka Soomaaliya dhibaato aan beeshaani aheyn kama jirto waxeyna isku qeybiyeen qaar dadka dhulkooda iyo beerahooda kula dagaala sida dagaalka ay hada ka wadaan Shabelaha Hoose iyo kuwo si xeeladeysan dadkii hantidooda u dhacaya oo warshado u sameystay.
La soco wararkeena danbe iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Mr Tiiceey sida uu bulshada Soomaaliyeed u dhacay inagoo waxyaabo badan daaha ka rogi doono.